राजीनामा दिने छानविन समितिका सदस्य केसी पुनः काममा फर्कने गृहमन्त्री बादलकाे भनाई ! - Nepali Online News Media-shikharnews.com
राजीनामा दिने छानविन समितिका सदस्य केसी पुनः काममा फर्कने गृहमन्त्री बादलकाे भनाई !
काठमाडौँ, २९ भदाै । निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या प्रकरणका सम्बन्धमा गृहमन्त्रालयबाट गठित ५ सदस्यीय उच्चस्तरीय छानविन समितिका सदस्य विरेन्द्र बहादुर केसीले असुरक्षाको कारण देखाउँदै समितिबाट राजीनामा दिने बताएपनि औपचाकिर राजीनामा नदिएको गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले बताएका छन् । संघीय संसदमा निर्मला पन्त प्रकरणबारे जानकारी गराउदै शुक्रबार गृहमन्त्री थापाले साे कुरा बताएका हुन् ।
मन्त्री बादलले सदस्य केसीले राजीनामा दिने सञ्चारमाध्यममा आएपनि पछि सुरक्षाको पूर्ण अनुभुति गराउने प्रतिवद्धतापछि केसी काममा फर्कन तयार भएको बताए । ‘छानविनि समितिका सदस्यले असुरक्षाको आशंका गरेको बुझेपछि मन्त्रालयले सुरक्षाको प्रत्याभुति गर्ने प्रतिबद्धता पछि उनी काममा फर्किएका हुन् । यद्यपी सदस्य केसीले राजीनामा औपचारिक रुपमा दिइसकेको अवस्था थिएन’ मन्त्री थापाले संसदमा भने । त्यस्तै मन्त्री थापाले निर्मला पन्त प्रकरणका अपराधीहरुलाई सरकारले जसरी पनि कानुनको कठघरामा ल्याएरै छाड्ने दावी गरे ।
‘अपराधीहरु कानुनको कठघरामा आएर छोड्छन् सरकार उनीहरुलाई उम्कन दिदैन’ मन्त्री थापाले बैठकमा प्रतिवद्धता जनाए । भने ‘घटनाको सत्यतथ्य छानविन र दोषीलाई न्याय दिन सबैको सहयोगको आवाश्यक्ता छ । सरकार यो प्रकरणमा गम्भीर भएको छ । यो सवैको मुद्दा बनेको छ । सरकारले यसबारे छिटो परिणाम ल्याउँछ । त्यस्तै गृहन्त्री थापाले रोल्पा घटनामा देवबहादुर घर्तीले रोहीत पुनलाई गोली हानेको भन्दै गोली हान्ने घर्तीलाई पेस्तोलसहित पक्राउ गरी आवाश्यक कारवाही प्रकृया अघि बढाएको दावी गरे ।
१६ वटा सञ्चारमाध्यम ‘अवज्ञाकारी’को सूचिमा